Zahao ity mailaka GIF manan-tsaina an-tsaina avy any Netflix | Martech Zone
Zoma 17 Novambra 2017 Douglas Karr
Amin'ny ankamaroan'ny torolàlana fampiharana tsara indrindra amin'ny mailaka novakiako, matetika ny manam-pahaizana dia manakana ny mpivarotra mailaka handefa mailaka miaraka amina endrika tokana. Tsy mbola mpankafy lalàna toy izao aho, mieritreritra foana fa ny manandrana paikady tokana dia mendrika ny fitsapana.
Androany ihany dia nahazo ity mailaka mahafinaritra ity avy amin'ny Netflix aho. Nisy ny andalana:
Hetsika mampiahiahy █████ Gaga amin'ny Netflix █████
Rehefa manokatra ny mailaka ianao dia hafatra tokana izay miseho fotsiny ho fampandrenesana avy amin'ny Netflix… fa miandry fotsiny.
Raha vantany vao hitako ny fisidinan'ny efijery dia nahazo ahy izy ireo. Ary eny… Notsindrio ilay izy ary nolalaoviko tamin'ny The Punisher ilay horonan-tsary. Ary eny, tsy maintsy jereko izao. Iza no tsy tia an'i Frank Castle?
Tags: mailaka mailaka animatedsary mihetsika gifGIFNetflix
Pixelz: Serivisy famerenana sary amin'ny laoniny fangatahana ho an'ny e-varotra